musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Kufamba kwekuzorora ibheji yakachengeteka yeAir France
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Air France yazivisa kuwedzerwa kusvika munguva yechando yezviya zvinowanzoitika zhizha-chete ndege kubva kuParis Charles de Gaulle kuenda kuSeville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba, uye Krakow.
Kubheja parwendo rwekuzorora kunogona kubatsira Air France kuti ikwanise kukurumidza.
Ndege inofanirwa kutarisa munzira dzakakwirira-dzekuzorora.
Vafambi vanoona kupukunyuka kwavo kwekuvhara nzvimbo.
Kubheja kweAir France munzira dzokutandarira kunogona kukurudzira kudzoka kwekukurumidza kweanotakura sezvo kufamba kwekuzorora kwekubuda muFrance kwakawedzera kusvika ku74.3% muna2020, kunyangwe zvirambidzo zvakadzora zvakanyanya huwandu hwenzendo dzinobuda.
Iwo maindasitiri nyanzvi vanoona kuti, nebhizimusi rekufambisa richidzvinyirirwa, iyo nendege inofanirwa kutarisa pakushandisa nzira dzakakwirira dzekuzorora uye upsell premium makamuri kune vafambi vebhajeti yepamusoro kuti vatsigire kupora kwakasimba.
Pre-denda, kufamba kwekuzorora kubva kuFrance kwakaverenga 72.1% yenzendo dzepasi rose muna 2019. Kuwedzera kwegore ra2020 kunoratidza kuti kudiwa kwekuzorora kungangove chimwe chezvikonzero zvakanyanya zvekufamba munguva yekudzoreredza vafambi pavanotiza kutiza kwavo kukiya nzvimbo.
Zvakare, maindastiri nyanzvi vanofungidzira kuti nzendo dzekuzorora kubva kuFrance dzichaona huwandu hwegore hwekukura (CAGR) hwe18.9% pakati pa2021 na2025, ichisvika 34 mamirioni nzendo dzepasi rose muna2025. tarisa pamigwagwa yekuzorora ichaisa mutakuri munzvimbo yakasimba. Kuunzwa kweMuscat, Zanzibar, neColombo, pamwe nedzimwe ndege ku Miami uye Papeete (Tahiti), dzese nzvimbo dzakanangana nezororo, dzinosimbisa kubheja kwemutakuri pakudzoka kwakasimba kwekufamba.
Air France yakazivisa kuwedzerwa kwechando kune izvo zvinowanzoitika zhizha-chete ndege kubva kuParis Charles de Gaulle kuenda kuSeville, Las Palmas, Palma de Mallorca, Tangier, Faro, Djerba, uye Krakow.
Nekuwedzera nzira idzi kunzvimbo dzinodziya nguva yechando (kunze kweKrakow), Air France iri kusimbisira tarisiro yayo yekuti nzvimbo dzinozivikanwa, dzekuzorora-dzakatarisana dzichadikanwa. Ongororo mhenyu yakaratidza kuti 41% yevakabvunzurudzwa pasirese vangangosarudza nzendo dzekunze kwenyika kunzvimbo imwechete yavaimboshanyira pre-COVID kana zvirambidzo zvadzikira. Tichifunga kuti nzira idzi dzaivepo pre-COVID, vanogona kubatsirwa kubva mukuwedzera chishuwo pakati pevafambi kushanyira kwavanoziva nzvimbo. Uku kufamba kwakanaka neAir France sezvo ichibatsirika kubva kune imwe mari nekugutsa manzwiro emusika aripo.
Sekureva kwesarudzo, 28% yevakabvunzwa pasi rese vakaratidza kuti bhajeti ravo rekufamba rakawedzera 'zvishoma' kana 'zvakawanda' kubvira kutanga kwedenda. Vatengi ava vanofanirwa kuve tarisiro yepamusoro yekirasi yeAir France yekureba-dhonza bhizinesi.
Mutakuri anotarisa pane dzimwe nzvimbo dzekutandarira dzinotora nguva refu munguva yechando ino ichapa mukana wakakwana wekusimudzira ruzivo rwebhizimusi rekirasi kune vafambi vekuzorora, kunyanya avo vane bhajeti yepamusoro. Pre-COVID vafambi vebhizimusi vaive musana wemari yepayimari, asi nekudiwa pasi, vafambi vezororo vanofanirwa kuve tarisiro yepamusoro. Bhizinesi kirasi rinofanirwa kusimudzirwa neAir France seyakanaka kutanga uye / kana kupera kuzororo. Nekukwiridzira kumapuratifomu ezororo, mutakuri anogona kudzora pakurasikirwa kwebhizimusi kudiwa, achidzivirira pakurasikirwa kwemari.